#GVfamily · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jona 2019 19:07 GMT
Nanomboka tamin'ny taona 2011 ny fianjoriako mahafinaritra niaraka tamin'ny Global Voices rehefa nitady hirika hiasa an-tsitrapo aho ary namaky lahatsoratra momba ny GV tao amin'ny New York Times. Fotoana fohy taorian'izay dia niditra tao tamin'ny ekipa Lingua aho ary nanomboka nandika lahatsoratra avy amin'ny teny espaniola ho amin'ny teny Anglisy. Ny dikan-teniko voalohany dia ny adi-hevitra nateraky ny fanatrehan'i Mario Vargas Llosa ny Foaran'ny Boky Iraisam-pirenena tao Arzantina tamin'ny taona 2011.
Rehefa tonga tao amin'ny GV aho, dia somary nanam-bintana nanana tonian-dahatsoratra roa mahafinaritra – Firuzeh Shokooh Valle sy Silvia Viñas. Tsy mbola nanao asa fandikan-teny matotra tahaka izao mihitsy aho taloha ary teo izy ireo nanampy ahy tamin'ny zavatra rehetra sy ny zava-drehetra. (Ankehitriny satria nifindra i Silvia, dia faly aho ao anatin'ny ekipan'i Gabriela García Calderón!) Rehefa nandeha ny fotoana, dia nanomboka nandika lahatsoratra maro hatrany aho no sady tsy nahatsikaritra ny haben'ny asa vitako. Isaky ny nanana fotoana malalaka tamin'ny andro fiasako aho dia nandika teny ho an'ny GV.
Efa niteny izany aho teo aloha ary holazaiko indray – ny asa an-tsitrapo nataoko tamin'ny GV dia tsy tsapako velively ho asa. Voninahitra izany ary mahafinaritra tokoa ny mandika lahatsoratra manan-danja toy izany mba hahafahan'ny rehetra mahazo vaovao avy amin'ny firenena manerana izao tontolo izao ary tsy voafetran'ny sakana ara-piteny.
Io fandikan-teny voalohany io no nanokatra varavarana maro ho ahy, anisan'izany ny fiitaran'ny tambajotran'ny asako mba hananana namana vaovao manerana izao tontolo izao izay eo hatrany hampiseho ahy ny firenena niaviany rehefa tafahitsoka amin'ny dia aho.
Ny andro nahafantarako ny GV dia mihoatra noho ny hirika an-tsitrapo, raha sambany nihaona tamin'i Firuzeh aho. Nandeha tany Boston hitsidika ny alma mater-ko (mpiahy an-tsekoly) aho ary nanapa-kevitra ny hihaona izahay. Niandry azy teo amin'ny fiantsonan'ny metro aho raha naheno olona niantsoantso hoe “MARIANNA !!!”. ary noraisina tamim-pitiavana aho. Nahafinaritra izany satria olona nifandray tamiko tamin'ny alàlan'ny mailaka ihany izy kanefa dia nandray ahy toy ny hoe nifankahalala teo amin'ny fiainanay manontolo izahay. Tamin'izany fotoana izany dia fantatro fa tsy ao anatin'ny rafitra aho – fa ao anatin'ny fianakaviana iray.